प्रहरीले दमन गरेको भन्दै तरुण दलद्वारा देशभरका प्रशासन कार्यालय घेराउ
काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलले आज तरुण दलले देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ। तरुण दलले आज ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने बताएको छ। तरुण दलले प्रहरी दमनको विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन चर्काउनेसमेत चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर देउवाले भनेः डा. केसीसँग वार्ता गर्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो सुझाव दिएको नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
अपराधीलाई निस्तेज गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्धः गृहमन्त्री थापा
लालबन्दी । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सबै प्रकारका अपराध र अपराधीलाई निस्तेज गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल मगर संघ २ नं प्रदेश समितिले आज सर्लाहीको लालबन्दीमा आयोजना गरेको सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले जनतालाई ठग्ने, विकास निर्माणका काममा लापरबाही गर्ने र राज्यको राजश्व दोहन गर्ने सबैलाई क्रमैसँग कारबाही गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापतिबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी अनसनरत डा। गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो सुझाव दिएको नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वार्ताको माध्यमबाट डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री पण्डितको भनाई
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनशनरत डा गोविन्द केसीका माग सरकारले वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले संसदमा प्रस्तुत भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन नहुने भन्दै वार्ताबाट डा केसीको जायज माग समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
अध्यक्ष वैद्यद्वारा डा. केसीसँग भेट, आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको भनाई
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यले आज शिक्षण अस्पताल पुगी डा गोविन्द केसीलाई भेटी उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका छन् । अध्यक्ष वैद्यले डा केसीलाई भेटी उनको अभियानमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ रहेको बताएको डा केसीका सहयोगी विशद् दाहालले राससलाई जानकारी दिए ।
तरुण दलको ¥यालीमा प्रहरी हस्तक्षेप, काँग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाल तरुण दलले निकालेको शान्तिपूर्ण ¥यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा चार दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइतेको निजामती र कान्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । निजामती अस्पतालमा तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्प शाहीलगायत तीन दर्जनभन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ ।
सडक आन्दोलनबाट होइन संघीय संसद्मा नै हुनेछ डा केसीको मागको परीक्षण
काठमाडौँ । सडक आन्दोलन वा अनशनबाट नभई जनप्रतिनिधिको थलो सार्वभौम संघीय संसद्बाट नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजानुपर्ने आवाज बढ्न थालेको छ । जनादेशप्राप्त संघीय संसद्भन्दा बाहिरबाट खोजिने निकासले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो नबनाउने र त्यसले विधि र प्रक्रियालाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
तरुण दल र प्रहरीबीच झडप: माइतीघर मण्डलाबाट नयाँबानेश्वर पुग्दा जे देखियो [फोटोफिचर]
काठमाडौं । नयाँबानेश्वरमा डा. गोविन्द केसी समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । झडपमा तीन दजर्जनभन्दा माथि घाइते भएका छन् । डा. केसीले राखेका मागहरूको समर्थन र केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै शनिबार प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले नयाँबानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा झडप भएको हो ।